Inkcenkceshela. Akunakunqunyulwa ngokuthenga ilitye?
Abathengisi belitye elinqabileyo kunye nabathengisi bezacholo basebenzisa ubuchwepheshe obuninzi ukukholisa ukuba uthenge. Ayinamsebenzi nokuba ulihlwempu okanye usozigidi. Bayayazi indlela yokufumana indlela yokukuqinisekisa. Bakujongile de bazibone iinkwenkwezi ziqala ukukhanya emehlweni akho. Bakuqhatha, ukuze bachithe imali onayo epokothweni.
Abathengisi beMatye awanalo gemologists
I-99.99% yabathengisi beelitye ayinalo gemologists. Bathengisi, baqeqeshelwa ukuthengisa amatye ngeeyure ezimbalwa okanye iintsuku ezimbalwa, ngokufanelekileyo. Awunabahlobo apho. Bajonge kuwe njengendlela yokwenza imali.
Eyona ndlela yokuthenga ilitye okanye igugu kukungazimameli iingxoxo zabathengisi, kuphela ukuxhomekeka kwinto oyaziyo nakubonayo. Abathengisi abayi kuyeka ukukuthinta ngokweemvakalelo, ukukuhambisa. Ke, chasa, mamela ingqiqo yakho.
Izikratshi kwiintengiso ezincinci
Masiqale ngobuqhetseba kwiivenkile ezincinci, imigodi okanye kwindawo yemveliso yamatye.
Ukuba umdayisi unika ixabiso lentsimbi okanye ilitye, kwaye ngokukhawuleza unikezela ukunciphisa intengo ngesigamu, kufuneka ubaleke kakuhle.
Zibuze: ukuba uya kwindawo yokutyela, uthenge indlu, inkukhu yokugcoba okanye ityhupthi yezinyosi, ngaba uya kunikwa i-50% isaphulelo ngaphandle kwempawu zokupapasha? Impendulo ayikho. Akunangqiqo, akunandaba nokuba ilitye liyinyani okanye libuxoki, uya kuqhankwa.
Abahloli beetye, ukushisa ngamatye, ukutshiza ngamatye ngokunye, njl
Konke okungaqondi. Ngokuqinisekileyo ukuba ukwakhiwa kweekhemikhali zelitye elenziwe ngokulinganayo lifana nelitye lemvelo. Iya kuthatha isiganeko njengelitye lokwenene kuzo zonke iimvavanyo eziza kuba nazo.
Thelekisa ilitye lokuqhelanisa kwisiqwenga seglasi
Ukukukhohlisa, abathengisi bathelekisa ilitye lokwenziwa nesiqwenga seglasi. masithethe ngomzekelo weRuby. URuby lilitye elibomvu elivela kusapho lwe-corundum. Ukwenziwa kweekhemikhali ikakhulu yi-aluminium oxide. Iruby eyenziweyo yenziwa nokwenziwa kwemichiza efanayo neyokwenyani. Bayakuphendula ngendlela efanayo kuzo zonke iimvavanyo oya kuthi uboniswe zona. Abathengisi baya kuthelekisa amatye amabini: iruby eyenziweyo kunye nesiqwenga seglasi ebomvu. Ukuchaza ukuba ngamatye amabini ahlukeneyo, ukuba iglasi lilitye elingelolokwenyani kwaye iruby eyenziweyo lilitye lokwenene. Kodwa kuyaxoka. Omabini la matye ayinyani kwaye awanaxabiso.
Izikratshi kwiivenkile ezintle
Ngoku, umzekelo wevenkile enhle, ikota yokunethezeka, ivenkile yokuthenga okanye isikhumulo sezindiza.
Abadayisi abayi kuzama ukukuqinisekisa ukuba amatye anyanisekileyo ngetye leempawu okanye kwizaphulelo zentengiso. Inkqubo esetyenzisiweyo kule meko iyinto efihlakeleyo: ukubonakala kunye nezixhobo zeelwimi.
Ngubani oza kukhankanya ukuba ivenkile enobugcisa obubonakalayo, ezele abagcini bezitolo ezigqoke kakuhle kunye nabafundi abazifundisayo, ngokwenene bathengisa iimpahla eziyinyumba?
Yenza iimvavanyo ezithile ngokubuza imibuzo. Ukuba uphulaphula ngokucophelela iimpendulo, uya kuqonda ukuba ezi zivakalisi ziyakhumbula ngekhanda. Kanye nje ngeempendulo zabagadi beenqwelo zokuhamba, okanye ukubiza umninimzi wendawo.
Umbuzo 1: Ngaba uthengisa amatye endalo?
Impendulo: Madam, Oku kuyinyani ye-crystal.
Igama elithi "crystal" kwi-gemology libhekisa kwinto ebonakalayo. Oku akuthethi ukuba ilitye ngokwendalo okanye ngokwenziwa.
Umbuzo 2: Isinyithi isiliva?
Impendulo: Nkosikazi, sisinyithi esixabisekileyo.
Akazange athi "ewe" okanye "hayi". Khange awuphendule umbuzo wakho.
Igama elithi "isinyithi esixabisekileyo" nalo alinantsingiselo yomthetho. Ngapha koko, le venkile ithengisa izacholo ezenziwe ngesinyithi sesinyithi esingenasilivere, golide, okanye nayiphi na intsimbi exabisekileyo.
Njengoko ubona, akukho ndlela yokumangalisa ukuphepha. Ingqiqo yakho efanelekileyo kukukhusela kwakho.